I-Apple inomdla wokuthenga phantse i-3.000 yeemitha zesikwere kwidolophu yaseReno | Ndisuka mac
Abafana abavela eCupertino abazinikelanga kuphela ekwandiseni inani leeVenkile zeApple, kodwa bajonge kwiminyaka yakutshanje ekwandiseni inani lamaziko edatha, amaziko edatha abanikezela ngawo iminxeba, imiyalezo, iCloud, Ivenkile yeApple, Apple Music ... Isixeko saseReno, eNevada, sibonakala ngathi siyinjongo ebalulekileyo esixekweni, kuba kule minyaka idlulileyo, iApple ibinomdla wokwenza utyalomali olwahlukileyo kule ndawo. Kwelinye icala sifumana iziko ledatha elikhulu elibekwe kwiReno Technology Park, iziko ledatha eliza kulawulwa yifama enkulu yelanga ekwaziyo ukuvelisa iimegawathi ezingama-200 zamandla kwaye oko kuza kuqala ukusebenza ngaphambi kowama-2020.
Kodwa utyalo-mali luka-Apple alupheleli apha, kuba iApple ikhangela indawo ephantse ibe zi-3000 zemitha kwidolophu yaseReno, indawo eya kuba negunya lokulawula iziko ledatha elikwiReno Technology Park. Kuyabonakala ukuba, iApple sele ifumene indawo kwezi njongo, kodwa ifuna ukuvunywa libhunga ledolophu yaseReno, eliza kudibana ngoLwesithathu. Emva kweminyaka eliqela ngasemva kwezi zibonelelo, kubonakala ngathi iApple ekugqibeleni ifikelele kwisivumelwano noMntla, inkampani ethengisa izindlu nomhlaba.
Akunakulindeleka ukuba iBhunga lesiXeko iReno libeke iingxaki kolu tyalomali, kodwa ke, iApple ayifuni kuphela imvume yakho, kodwa ikwajonga noncedo lwerhafu, into exhaphakileyo kwiinkampani ezinkulu xa ziceba ukwenza utyalomali olubalulekileyo Indawo ethile. Okwangoku, iApple iyaqhubeka ukugxila kuyo amaziko amabini edatha oceba ukuwavula eYurophu, enye eDenmark, esele iqalile ukwakhiwa kwayo, kunye nenye eIreland, apho inkampani iqhubeka nokuba nengxaki yokuya phambili.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-Apple inomdla wokuthenga phantse i-3.000 yeemitha zesikwere edolophini yeReno